पहिले–पहिले स्कुलमा नाटक देखाउँदा बीचबीचमा कमिक राखिन्थ्यो । कमिक झल्लाझल्ला खालको हास्यरस भएको सपाट जोक्कर्‍याइँ हो । जोक्कर्‍याइँ जीवनको अभिन्न अङ्ग हो, अनिवार्य तत्त्व हो । पलभरका लागि नै सही, तनाव, आह र औडाहालाई मत्थर पार्ने थेरापी हो यो ।
भिखारी र पूँपाहा कम्निस्टहरू
तोदिन कानै खाने डंक पिटानको स्वरमा सुनिन्छ— अब भने देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो  । उन्मादको तहमा उमंगित र पुलकित शासकहरू यसै भन्छन्  ।
जीवनभर जो निमुखा भुइँमानिसका बोली थिए, भर्खरै तिनले सदाका लागि बोली बिसाए । जो गरिखाने जनका आँखाका नानी र ठगीखाने जीवात्का आँखाका कसिंगर थिए, तिनले फेरि कहिल्यै नखुल्ने गरी आँखा चिम्ले । र, कृतज्ञताभावले नतमस्तक हुँदै उदास मुद्रामा हामीले भन्यौँ— श्यामप्रसाद अब सशरीर हामीमाझ रहेनन् ।
डीपी सर जसलाई भेटियो र भेटिएन
मैले सोधेँ— सर, मलाई चिन्नुभो ? म रिपु क्या रिपु । बूढा ठट्टैठट्टामा मलाई रिपु वा लेखनी जगत्को प्रतिस्पर्धी भन्थे । बूढाका मुखबाट अस्पष्ट ध्वनि प्रकट भयो । तल्लो ओठ सन्तुलनकारी तन्तुहरू शिथित भएझैँ, दाँत फुक्लिएझैँ पोको पर्‍यो । मैले भनेँ— डीपी सर, म तपाईंको चाबेलको चाउरे क्या ?
बकिङघम प्यालेस हुँदै मार्क्स
बकिङघम प्यालेसले सम्झाउँछ सिंहदरबार, शीतलनिवास दरबार र बालुवाटार दरबार । यी जिनिसहरूमा बेलायतको संसदीय थिति र नेपालको संसदीय बेथिति जब देख्छु, मेरो मन त्यसैत्यसै उद्विग्न हुन्छ ।
उड्यो यायावर यूकेतिर
भाद्र ३०, २०७५
१० जुलाई २०१८ । दिउँसो ३ बजेतिर जेबी फोनको घन्टी बज्यो— कोकुली क्वाँक्, कोकुली क्वाँक् । हेर्छु, नम्बर परदेशको छ । परदेशी छोराछोरीको होइन, कसको होला यो ?‘सेवा रो दाजु, म नरेश काङमाङ ।’
लन्डन टेक्नासाथ निम्तागरी पठाउने मनकारी घरबेटीलाई सोधेँ— यहाँ हाम्रा राजदूत को छन् ब्रो ? उत्तर आयो— मिस्टर दुर्गाबहादुर सुवेदी । पछि आदिवासी–जनजाति सभामा प्रमुख अतिथिको औतारमा राजदूत प्रकट भए । अरे, ती ब्रो त दुबसु क्षत्री पो रहेछन् ! बडो फुर्तिला, वाचाल र कूटनीतिक कर्म र भाषाले सबैको मन र मान राख्न हुनुसम्म सिपालु ।
यस पत्रमा वैशाख, जेठ र असारमा हङकङ विचरणका मेरा तीन थान संस्मरण छापिए । एक थानमा मैले देश सुब्बाको सरलरेखीय भयवादमाथि मलुवा टिप्पणी गरेको थिएँ । एकाध जिज्ञासा, एकाध व्यङ्ग्य र एकाध कटाक्षको सम्मिश्रण थियो त्यो । निकै दिनपछि सायद निकै गमेर र निकै कनेर श्री सुब्बाद्वारा प्रतिक्रिया गरियो । र, प्रकट भयो त्यो प्रतिक्रिया २३ असारको कान्तिपुरे कोसेलीमा । प्रतिक्रिया गर्ने कष्टपूर्ण चेष्टाबापत सुब्बासाहेपलाई मेरो भारी साधुवाद ।
दस हजार बुद्ध, आँसु र अनुराग
बुद्ध दर्शनका दृष्टिमा मूर्तिपूजा सनातनी रूढि हो । र, अन्धमति कर्मकाण्ड हो यो । आत्मिक जागरण र प्रबोधनको सुन्दर माध्यम यो किमार्थ होइन । हो त यो केवल मनोवैज्ञानिक लम्पटपना र आत्मिक दासताको कुरूप माध्यम । कटु अनुभव भन्छ– कालान्तरमा सबै दर्शनको नियति यही हो । मूर्तिमा पतित गराइनु, पुजिनु र तुच्छ स्वार्थका लागि बेचिनु !
हङकङ यात्राको निम्तो विरलाकोटी हो भन्ठानेर म त्यसैत्यसै मखलेल भएको थिएँ, गाँठ्ठी कुरो बुझ्दा त्यो रहेछ सनातनी र सरदर दर्जाको । मेरो फुक्र्याइँ र अभिमानको पारो ह्वात्तै झर्‍यो र म सरदर मनोदशामा उत्रिएँ । आठ–दस वर्षयता हङकङ जानेहरू त गाँठ्ठे, सानोतिनो जुलुससरह भइसके छन् ।